आजबाट देशभर हात्तीपाइले विरुद्धको औषधि खुवाइँदै Setokhari ::. News Portal
सोमबार, चैत ३०, २०७७ ०५:४७:५९
सरकारद्वारा १८ करोड बढि विनियोजन
दीपक शर्मा 2077-12-20
नेपालगन्ज २० चैत : हात्तीपाइले रोग निवारण अभियानअन्तर्गत आजदेखि देशका १२ जिल्लामा औषधि सेवन कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदैछ ।
हात्तीपाइलेका बिरामीहरु देखिएका बाँके, कैलाली, बर्दिया, दाङ, झापा, धनकुटा, मोरङ, बारा, लमजुङ, पर्वत, बाग्लुङ र कपिलवस्तुमा आजदेखि औषधि वितरण गर्न लागिएको हो । पालिकाहरूमा आफूलाई पायक पर्ने स्वास्थ्य संस्था बुथबाट औषधि निःशुल्क लिन सकिन्छ ।
तर, दुई वर्षमुनिका बालबालिका, गर्भवती, सात दिनसम्मका सुत्केरी तथा सिकिस्त बिरामीहरूले भने यो औषधि सेवन नगर्न चिकित्सकहरूको सुझाव छ । यस्तै, यो औषधि खाली पेटमा नखान, खाइसकेपछि हुने सामान्य ज्वरो, रिंगटा लाग्ने, वाकवाकी लाग्ने, हल्का पेट दुख्नेजस्ता लक्षणलाई सामान्य रूपमा लिन पनि चिकित्सकहरूले आग्रह गरेका छन् ।
सरकारले आजबाट देशका १२ जिल्लाका एक सय २९ स्थानीय तहका २ वर्ष भन्दा माथिका ७० लाख ४५ हजार नागरिकलाई हात्तीपाइले रोग विरुद्धको औषधि खुवाइदैछ ।
त्यसका लागी ५ हजार ४ सय स्वास्थ्यकर्मी र ९ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयसेविका परिचालन गरिएकोछ ।
सरकारले यस वर्ष हात्तीपाईले रोग विरुद्धको अभियानमा १८ करोड ६१ लाख ५० हजार रुपैया विनियोजित गरेको छ । जस मध्ये १२ करोड ९० लाख रुपैया स्थानीय तहमा पठाइएको छ भने प्रदेश र जिल्लामा २ करोड ३९ लाख र केन्द्रमा २ करोड ६५ लाख रुपैया छुटयाइएको छ ।
बाँकेका ८ पालिकामा एकदिन अघि शुरु
बाँकेमा हात्ती पाइले रोग विरुद्ध औषधी सेवन पूर्व कार्ययोजना भन्दा एक दिन अघि नै शुरु गरिएको छ ।
औपचारिक रुपमा शुक्रबारबाट अभियानको शुरुवात भएपनि जिल्लाको प्रमुखले औषधी खाएर सबैले सेवन गर्नुपर्छ भन्ने शन्देश दिनकै लागि औषधी सेवन शुरु गरिएको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका प्रमुख धिरजंग शाहले बताए ।
उपमहानगरपालिकामा मात्रै यस वर्ष एक लाख ६६ हजार ८ सय ८६ जना लक्ष्य लिइएको छ भने बाँके जिल्लामा ५ लाख ७६ हजार ७६ जनालाई हात्तीपाईले रोग विरुद्धको औषधी खुवाउने लक्ष्य रहेको छ । अभियानमा बाँकेका ४ सय ९० जना स्वास्थ्यकर्मी र ७ सय ८९ जना महिला स्वास्थ्य स्वंयसेवक खटिएकाछन् ।
बाँकेमा २०६७ सालदेखि हात्तीपाइले रोग विरुद्धको औषधि खुवाउन शुरु गरिएपनि समुदायपिच्छे आमनागरिकमा औषधीप्रति गैरजिम्मेवार बन्दा हात्ती पाइले विरुद्धको औषधी सेवन अभियान सफल हुन सकेको छैन ।
बर्दियाका नागरिकलाई पनि औषधी खुवाइदै
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बर्दियाका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत गोकर्ण गीरीका अनुसार बर्दियाका ४ लाख ६२ हजार जनसंख्यालाई औषधि खुवाउन शुरु गरिएकोछ ।
पहिलो चरण अन्तर्गत चैत्र २० गते हात्तिपाइले रोग विरुद्धको औषधि खुवाइने छ । छुटेकालाई घर दैलो अभियान चलाइ समेट्ने योजना रहेकोछ ।
कसरी लाग्छ हात्तीपाइले रोग ?
हात्तीपाइले रोग मानिसलाई नराम्रो गरी शारिरिक रुपमा असक्त, असमर्थ तथा अपागङता बनाउने एक सरुवा रोग हो । यो रोग एक प्रकारको मसिनो धागो आकारको जुका जस्तै परजिविले गराउदछ र यो रोग संक्रमिति पोथि लामुखुटटेको टोकाइबाट सर्ने गर्दछ । मानिसको शरिरमा यो परजिवि प्रबेश गरेको केहि वर्ष पछि मात्र यस रोगका लक्षणहरु देखिने गर्दछ ।
हात्तीपाइले रोगबाट बच्न तथा प्रारम्भिक अवस्थामा नै पुर्ण रुपमा निको हुनका लागी यो रोगको जोखिम भएको सम्पुर्ण जिल्लाका नागरिकलाई औषधि सेवन कार्यक्रम संचालनमा ल्याइएको हो ।
पूर्ण खोप घोषणामा तगारो बन्दै ‘रोटीबेटीको सम्बन्ध’